PUBG မိုဘိုင်း၏အသစ်ပြုပြင်မှုတွင်လေဆာဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်အတူရည်ရွယ်ပါ Androidsis
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကဒီအတိတ်ခရစ်စမတ်ရောက်ခါနီးတွင် Vikendi မြေပုံအသစ်ကိုခံစားပြီးနောက် PUBG Mobile ကိုဗားရှင်း 0.010.5 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်, Pass Royale ၏ပဉ္စမရာသီစတင်တစ်ချိန်တည်းမှာ။
နောက်ဆုံးထွက်မွမ်းမံမှုတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းမတူညီသောသတင်းများနှင့်ပါ ၀ င်သည် အရေခွံအသစ်များစုဆောင်းရန်လမ်းဖွင့်ပေးသောရာသီအသစ်တိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းနှင့်အခြားအထူးလက်ဆောင်များအတွက်သင်စုဆောင်းထားသည့်အခြားလက်ဆောင်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာများ၊ ရာထူးများကိုလည်းပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် PUBG ကိုယနေ့ မှစတင်၍ ကောင်း၏။
1 PUBG Mobile ဗားရှင်း ၀.၁၀.၅
PUBG Mobile ဗားရှင်း ၀.၁၀.၅
Tencent Games သည် Fortnite ၏အောင်မြင်မှုကိုဂရုမစိုက်ပါ။ စဉ်တွင် Epic Games သည် console cake ကိုမျိုချလိုက်သည် နှင့် PC များ, PUBG Mobile သည်၎င်းကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည်နည်းပညာသစ်တိုင်းကိုအဓိကဗားရှင်းအသစ်များဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည့် aupa ၏တော် ၀ င်တော် ၀ င်မှုတိုးတက်အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြသည် ကျနော်တို့ခရစ်စမတ်မှာခဲ့တကဲ့သို့.
ငါတို့သည်လည်းနိုဝင်ဘာလ၏အဆုံးအကြောင်းပြောဆို arcade mode နဲ့အခြားအဓိက update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ထက် 100 ကစားသမားများနှင့်ပိုပြီးသတင်း၏ သင်ဒီမှာမှသိနိုင်သည်; အသစ်ပြောင်းခြင်းဤမျှများပြားသောကြောင့်လက်နက်အသစ်များ၊ မြေပုံများ၊ ပုံစံများနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောအသစ်ဖြည့်စွက်မှုများနှင့်အတူပင်ပျောက်ဆုံးသွားသည်။
ဤအချိန်တွင် PUBG Mobile ဗားရှင်း ၀.၁၀.၅ တွင်လက်နက်အသစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားပြီး MK0.10.5၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်အတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, Laser သက်ပြင်းချt ။ အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်၏အထူးခြားဆုံးအချက်များမှာယခင်အသံများကိုပြန်လည်ပြန်လည်ရယူနိုင်ပြီး Tencent Games ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်ရွာကိုနေရာချထားသောလူသစ်များကိုဘေးဖယ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ Counter Strike ကိုတီထွင်သူများသည်တစ်ချိန်က“ တွင်းပေါ်ရှိမီးကို!” ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ခြင်းသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။
ဤသည်မှာအသစ်ပြောင်းခြင်း၏စာရင်းအပြည့်အစုံဖြစ်သည် ဒေသများအားဖြင့်ချထားလျက်ရှိသည် PUBG Mobile ကိုဖွင့်သောအခါဘာတွေ့မည်လဲ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်သည် Google Play စတိုးသို့မွမ်းမံရန်မလိုအပ်ပါ။
MK47 ကဆက်ပြောသည် ၎င်းကို Erangel, Miramar နှင့် Sanhok မြေပုံများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၇.၆၂ မီလီမီတာ ammo မီးများနှင့်မီးနှစ်မျိုးရှိသည်။
La "ဂန္ထဝင်" အသံသည်ပြန်လာပြီ။ ၄ င်းကို update ပြီးနောက် setting တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ယခုသင်စတင်နေသောကျွန်းပေါ်ရှိကြော်ငြာများကိုချိန်ညှိချက်များမှ activate သို့မဟုတ် deactivate လုပ်နိုင်သည်။
ရာသီ Royale Pass5ကိုရပြီ။ ပရီမီယံအရေခွံများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကိုဆုအဖြစ်ရယူနိုင်သည်။
Royale Pass သို့နောက်ဆုံးသတင်းများကို update လုပ်ခြင်းသည်ဆာဗာတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၅ ကိုပြန်လည်ချိန်ညှိပြီးရာထူးအသစ်များထပ်မံပေါင်းထည့်သည်။
အဲဒီလောက် .... ရှိပြီ Vikendi loot updated အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၌တည်၏။
El «အပေးအယူလုပ်မှုများအတွက်ဝေမျှခြင်း»ပြန်လာပြီ အချို့သော optimization အတူ။
Crew Challenge ဆုရှင် avatar ကိုပြင်ဆင်ထားပြီး
ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအဓိက menu မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ယခုအသစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူရာသီ ၅ ကိုလည်းစတင်ပြီးဖြစ်သည် စတုတ္ထအဆုံးသတ်ထားသည်။ Royale Pass ကိုရယူရန်နှင့်သင့်အားတိုက်ခိုက်နေသောသူရဲကောင်းကို ၀ တ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုမည့်အထူးမစ်ရှင်များနှင့်အရာဝတ္ထုအားလုံးမှအကျိုးရရှိရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။
PUBG Mobile ကိုစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေနဲ့ဗားရှင်း ၀.၁၀.၅ ကိုအဆင့်မြှင့်ထားတယ် နှင့်ရာသီ5၏အစ။ ယခုတွင်သင်သည်ကစားခြင်းကိုစတင်ပြီးစစ်မြေပြင်၌သင်၏တန်ဖိုးကိုသက်သေပြရန်လိုအပ်သည်။ မမေ့ပါနှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာအချို့.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » PUBG Mobile သည် ၀.၁၀.၅ နှင့်မွမ်းမံပြီးရာသီ ၅ ကိုစတင်သည်
Snapdragon 855 သည်အခြားစမ်းသပ်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူ AnTuTu တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းထက်သာလွန်သည်